Central Africa-ndọrọ ndọrọ ọchịchị | KONGOLISOLO
Ikike icheta: agha site na onye nnọchiteanya dịka Vital Kamerhe siri kwuo; Onye ọchịchị Congo na onye nwere ndọrọ ndọrọ ọchịchị gara aga ebe ọ maara mmiri ozuzo na ihu igwe dị mma, Vital Kamerhe site na ime ya, gosipụtara ikike dị elu na mmekọrịta mba ụwa… (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: July 3, 2020 10: 45 Enweghị asịsa
Vital Kamerhe abụwo onye kacha nọrọ nso n’okwu ya; o gosiputara n'ụzọ doro anya osisi nke "Agha site na onye nnọchianya", na egwuregwu nke nne nke ike dị ukwuu, ọtụtụ ndị na ...	GỤKWUO
Mpempe akụkọ ihe mere eme nke DRC: ihe ị ga - ejide n'aka gọọmentị Moïse Tshombe (1964 - July 1965)? Ọ bụ otu n'ime ndị ama ama na akụkọ ihe mere eme nke Democratic Republic of Congo (DRC) mgbe mmachara mba ahụ nwechara na June 30, 1960
Site na: KongoLisolona: June 24, 2020 16: 10 Enweghị asịsa
O bu onye isi ike nke ochichi nke ndi Katangese, abali iri na otu nke nnwere onwe nke Kongo. Ọ jee biri n'ala ọzọ mgbe ihe gbagwojuru anya mgbe ogbugbu Patrice Emery Lumumb…	GỤKWUO
N'afọ ndị a bụ abụ na ite egwu na otuto nke Zairian Leopard; ofufe nke omume mere nrọ Mobutu nke ike ebighebi, na-echefukarị ike mmadụ "Ọnwụ"
Site na: KongoLisolona: June 24, 2020 14: 35 Enweghị asịsa
Nwee obi ụtọ na ịgba egwu na ndị na-abụ abụ, nke ahụ bụ nzube Mobutu Sese Seseko, onye bụbu onye ọchịchị Democratic Republic of Congo, na mgbe ahụ Zaire. Mobutu nwere ọfụma n'iji magnetizing na…	GỤKWUO
Mobutu chere ihu n’uche nke ndị na-efe chi na ndị mmụọ ọjọọ; ndị mere Mobutu bụrụ chi, ọ bụ onwe ha kpọrọ ya ekwensu tupu ha ekpochapụ ya
Site na: KongoLisolona: June 24, 2020 12: 18 Enweghị asịsa
Ruo oge Mobutu jere ozi maka ọdịmma ndị ọdịda anyanwụ, ọ bụ onye nlereanya na onye ùgwù nye Africa. United States na West jiri Mobutu jiri…	GỤKWUO